About Us - Shenzhen Penyai Technology Co., Ltd.
Radiant inosimbirira "Chiito chinotaura zvinonzwika kupfuura mazwi" sehuzivi hwayo. Nyanzvi ye LED Screen yekugadzira, Radiant yakavambwa muna 2007 ine guta rakanyoreswa rinopfuura RMB10 mamirioni, uye ine nzvimbo yekushanda ye3000sqm kana 30,000 sf muLilan Technology Park muGuangming District. Kubva payakatanga, Radiant yakakura nekukurumidza. Zvigadzirwa zveRadhiant zvasvika nyika dzinopfuura zana nematunhu ...
Yakaoma Kushanda uye hunyanzvi, isu tanga tichishandisa iwo epamberi matekinoroji uye nekuvandudza kugadzira yakanakisa mhando zvigadzirwa. Isu tinobata odha yega yega sehunyanzvi sezvinobvira. Kuti tikwanise zvigadzirwa zvedu, isu tinosuma zvigadzirwa zvemberi zvekugadzira uye zviyero zvekuyedza kuchengetedza yakasimba yemhando yezvigadzirwa zvese. Nesimba rekubatana, zvigadzirwa zvedu zvakagamuchirwa uye zvakagashira zvitupa zvakawanda, senge, CE, CCC, FCC mvumo etc.
Radiant chigadzirwa mhando manejimendi inonyatso kuomerera kune ISO9001- 2015 zvitupa sisitimu uye 7S manejimendi standard. Kutsvaga kukwana kwakanyanya uye kwakasimba pesvedzero yeiyo LED indasitiri, tinovimbisa kune wese mutengi kuongorora yega yega odhiyo uye mhinduro. Ngatishandei takabatana, uye "Ratidza runako rwenyika" sebasa redu, kugadzira ramangwana rakajeka uye rakajeka.
CE-EMC (Zvakajairika Zvigadzirwa)
CE-LVD (Zvakajairika Zvigadzirwa)
CE-EMC (Transparent Yakatungamira Screen)